FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA CAVAPOO - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Cavapoo
Alika avy amin'ny Mpanjaka Charles Spaniel / Poodle Alika mifangaro
Charlie the Cavapoo (Mpanjaka any Cavalier Charles Spaniel / Poodle mix) rehefa olon-dehibe (jereo ny saribakoly alika etsy ambany), sary natolotr'i Ayers Pampered Pets
alemanina mpiandry ondry pug afangaro alika kely
Ny alika any Cavapoo dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Mpanjaka Charles Spaniel, Cavalier ary ny Poodle . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Mpanoratra International Canine Registry®= Cavapoo
Registra ny famolavolana endrika = Cavapoo
'Ity i Lucy. Izy dia Cavapoo, izay antsointsika hoe Aostralia hoe Cavoodle. 11 herinandro izy ary alika kely indrindra. Ny alina voalohany nahitanay azy dia napetrako tao anaty fitoeram-baravarankely malefaka miaraka amin'ilay sarony, fa niditra tao amin'ny trano fidiovana aho. Somary nitomany izy ary nifoha tamin'ny alina indray mandeha. Tamin'ny alina faha-4 dia tsy nanao whimper izy rehefa nampiditra azy aho ary tsy nifoha raha tsy tamin'ny 6:30 maraina. Mora nampiofana izy, naka hipetraka, nidina, nandao azy ary nikitika baiko nandritra ny 9 herinandro. Milalao izy, nefa koa tia misolelaka ambony fandriana. Izy dia tsara miaraka amin'ireo ankizy ary efa nitondra soa aman-tsara tany an-tranonay. Mbola mitomany izy amin'ny andro andaozantsika azy ... saingy tsy maninona isika rehefa mody, ary te-hiresaka amintsika fotsiny. Izy tia mitsako , fa tsy mitsako fanaka, rantsantanana sy zavamaniry bebe kokoa. Mandatsaka kely izy, saingy tsy azoko antoka raha zavatra alika kely izany, ary satria mivoaka ny vanim-potoanan'ny ririnina isika eto. Izy no alika kely indrindra. '
'Ity ny alikako Sloopy the Cavapoo amin'ny faha-7 volana. Tena mamy sy marani-tsaina izy. Hainy ny hipetraka, hijoro, hijanona, handry, hihorona, lakolosy hivoaka any ivelany / vilany, midina, mitaingina volana, mitsambikina, haka, tonga (na izany aza dia tsy tonga izy rehefa tsapany fa na dia fantany aza ny baiko), mail, oroka, avelao ary arotsaho. Izay rehetra nampianariko azy dia nianarany tamin'io andro io ary izy dia tsy afa-nanoatra tanteraka tao anaty roa volana (ny olana lehibe dia ny mitady fomba hilazana amiko ny fomba hivoahana, ka nahazo lakolosy ho azy aho). Izy dia tia mpiambina trano, saingy saro-kenatra ny olona eo amin'ny manodidina. Tena mahatoky koa izy ary manaraka ahy na aiza na aiza. Raha tara amin'ny alim-pandinihana aho dia miady mafy izy hiambina mandra-pandehako. Somary mifikitra ihany izy satria mitomany izy rehefa ao an-trano fidiovana aho ary lasa mpanaiky izy tamin'ny volana voalohany dia fantatro ny tsy firaharahiako azy mandra-pivoakantsika tany ivelany ary najanoko ny fanaovana azy. Malemy fanahy amin'ny ankizy kely koa izy. Na izany aza, tsikaritro fa tia tena izy tamin'ny biby hafa. Rehefa manodidina ny alikan'ny reniko (Doberman izay tsy atahorany) dia mangalatra ny kilalaony izy ary manafina izany amin'ny faritra kely loatra ka tsy tafiditra ao anatiny. Tiany ny mandevina taolana ao am-pandriana, mahazo fromazy, ny zaridainan'alika, amoron-dranomasina , alaivo (atsipazo ny baolina dia hilalao mandritra ny ora maro izy) ary mifamihina. Nampiasako ity tranokala ity hanampiana hahita biby fiompy / fikarohana, ary heveriko fa safidy tonga lafatra izy misaotra. '
Charlie the Cavapoo (Mpanjaka any Cavalier Charles Spaniel / Poodle hybrid) toy ny alika kely (jereo ny sary olon-dehibe etsy ambony), sary natolotr'i Ayers Pampered Pets
Sary natolotr'i Shaloma Loves Puppies
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Cavapoo
Sary Cavapoo 1
Lisitry ny Mpanjaka Alika Cavalier Charles Spaniel mifangaro alika
bullmastiff sy rottweiler afangaro alika kely
retriever volamena sy spaniel akoho
pug boston terrier mix sary
zanak'alika antsasaky ny yorkie chihuahua